Etu ị ga - esi mara ma Instagram adaala n'oge ụfọdụ | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Ngwa gam akporo, Gam akporo Ndị aghụghọ
Instagram bụ ngwa nke ọtụtụ nde ndị ọrụ gam akporo na-enweta kwa ụbọchị. N'oge ụfọdụ, ngwa ahụ emebiwo, dị ka o mere n’ọnwa ole na ole gara aga. Ọ bụghị oge mbụ na ngwa a na-jiri, ọ bụ ihe na-eme na ụfọdụ ugboro na ngwa ọdịnala nke Facebook nwere. Agbanyeghị, n'adịghị ka WhatsApp, ebe enwere uzo doro anya iji mara ma ọ daa, na netwọk mmekọrịta anyị enweghị ọrụ a.
Luckily, anyi nwere ike ime mara ma Instagram adaala n'otu oge. Ya mere, anyị maara ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu na ngwa na ọ bụghị na ekwentị anyị. N'echiche a, anyị nwere mgbe ụfọdụ ụfọdụ ihe anyị ga-atụle, nke na-enye aka.
N'ezie, ọ bụrụ na anyị na-eji Instagram n'oge ụfọdụ, ma anyị ahụ na ọ naghị arụ ọrụ, anyị nwere ike iche na ọ bụ nsogbu ngwa. N'oge gara aga enweela tụlee ya ọzọ, nke mere ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya iche nke a. Mana ọ bụghị mgbe niile ihe a ga-etinye n'ọrụ n'ọnọdụ a. Yabụ, enwere ụfọdụ ndenye ego na ọ nwere ike ịdị mma iburu n'uche.
1 Nlele na ekwentị
2 Instagram agbada?
Nlele na ekwentị
Otu n'ime akụkụ mbụ anyị nwere lelee ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie mmejọ Instagram. Yabụ, anyị nwere ike ịnwale iji ụfọdụ ọrụ na ngwa ahụ. Gbalịa imelite ndepụta, ma ọ bụ tinye profaịlụ mmadụ. Ọzọkwa ịhụ akụkọ banyere ụfọdụ akụkọ ndị ị na-agbaso na ngwa ahụ nwere ike inye anyị ntụnye aka na nke a. Ya mere, anyị na-ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu na ngwa ma ọ bụ na ọ bụghị.
Na mgbakwunye na nke a, Anyị agaghị echefu ịlele ma ọ bụrụ na ọ bụ ọdịda nke ekwentị gam akporo anyị. O nwere ike ịbụ na njikọ Internetntanetị anyị dị ala n'oge ahụ, ma ọ bụ na ọ na-agba nwayọ karịa nke mbụ. Nwale ịntanetị ma ọ bụ jiri ngwa chọrọ njikọ isntanetị bụ ezigbo nhọrọ. Ọ ga-enyere anyị aka ịmata nke ọma ọnọdụ a. Y’oburu n’inwe ike ịnyagharịa ma ọ bụ jiri ngwa ndị ọzọ, yabụ ọ ga - abụrịrị na mmejọ ahụ dị na Instagram. Ugbu a, enwere ụzọ ịlele ọnọdụ nke ngwa ahụ.
Iji nweta ozi a anyị nwere ike ịnweta weebụsaịtị ga-enye anyị ozi a. Offọdụ n'ime unu nwere ike maraworị ya, akpọrọ ya Down Detector, na ị nwere ike ịga na njikọ a. Weebụsaịtị a nwere ọrụ maka igosipụta ọrụ ọrụ ngwa dị iche iche ma ọ bụ ibe weebụ nwere. Yabụ, anyị nwere ike iji ya mara ma ọ bụrụ na Instagram adaala n'oge ụfọdụ, dị ka n'oge a kapịrị ọnụ anyị nwere enyo.
Down Detector bụ ibe weebụ nke a na-emelite mgbe niile. Yabụ, ọ bụrụ na Instagram daa na mpaghara ọ bụla nke ụwa, anyị ga-enwe ike ịhụ ya n'ụzọ dị mfe. Yabụ, ọ nwere ike bụrụ na enyo ị nwere gbasara ọnọdụ nke ngwa ahụ ga-emezu. Anyị nwere eserese na ntanetị nke anyị na-ahụ ọnọdụ ahụ, na mgbakwunye na maapụ mmebi. Nke a map na-egosi ebe akụkọ na e nwere a ọrụ okuku na ngwa si. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụ ihe dị na mpaghara, na mba ụfọdụ, ma ọ bụ na ọ bụ ihe na-emetụta ọtụtụ mba, dị ka ụfọdụ ngwa ahụ na-adaba.
Nke a bụ ụzọ kachasị mma iji lelee ma ọ bụrụ na Instagram agbadatala. Ihe nchọpụta ala abụghị naanị weebụsaịtị na anyị nwere ike iji n'echiche a. Ebe nrụọrụ weebụ ọzọ, nke nwere ike ịmara ọtụtụ n'ime gị, bụ IsTheServiceDown, dị na njikọ a. Weebụsaịtị a ga-enyekwa anyị ozi oge niile gbasara ọnọdụ nke ngwa ahụ. Yabụ ọ bụrụ na anyị nwere enyo gbasara ọnọdụ ya, anyị nwere ike iji otu n’ime ibe weebụ abụọ a wee chọpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi amata ma ọ bụrụ na Instagram dị ala
Google Maps ga - enyere gị aka ịchọta ọtụtụ ihe. Anyị na-akọwa nkọwa niile